फोटो फिचर – Page3– Ganatantra Online
जीतसागर जी.एम./ तुलसीपुर, १५ बैशाख । कृषिको काममा दक्षता भएकाहरुसंग जग्गा नभएर समस्या छ भने कृषि खेतीका लागि जग्गा पर्याप्त हुनेहरु खेती नै गर्दैनन् । कृर्षिका लागि उपयुक्त जग्गा नहुँदा पनि कृर्षि उत्पादन बढ्न सकिरहेको छैन् । जग्गा भएपनि माटोका कारण धेरै उत्पादन गर्न नसकिने समस्या छ, सबै माटो कृर्षिका लागि उपयुक्त पनि मानिदैन्...
दाङ महिला जेसिसको सप्ताह्ब्यापी कार्यक्रम समापनका केही झलकहरु….
शैक्षिक सुधारका लागि बालमैत्री र प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था
चक्र बहादुर रावत प्रिन्सिपल मेचिकाली बोर्डिङ स्कूल घोराही १. भर्ना अभियान कस्तो चल्दै छ ? – भर्ना कार्यक्रम बैशाख २ गतेदेखि शुरु भएको छ । त्यो भन्दा पहिलो अभिभावकसंग भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । (more…)...
घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले नगरवासीमा नयाँ बर्षको शुभकामन दिएका छन । उनले लेखका छन ‘सर्वप्रथम त नयाँ बर्ष २०७६ सालको पावन अबसरमा सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु । समय, परिस्थती र कालखण्डको परिर्बतन सँगै आउने नयाँ बर्षहरुले देशलाई शान्ति र संबृद्धीको दिशा तर्फ अघि बढाएको छ ।’ उनले नगरवासीको...
अनमोल केसीको फिल्ममा किन डेव्यु नायिका मात्र ? (सुचिसहित)
नायक अनमोल केसी सदाबहार नायक भुवन केसीका सुपुत्र हुन् । अनमोलले सन् २०१३ मा रिलिज भएको सुनिल रावलको फिल्म ‘होस्टेल’बाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा डेव्यु गरेका हुन् । पछिल्लो समय युवा पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय अनमोलका भागमा सधै नयाँ अनुहार अर्थात नव नायिकाहरु पर्दै आइरहेका छन् । उनको आठौं प्रोजेक्ट ‘ब्याचलर बन्टी’मा...
रीता लामा घोराही, २६ चैत । पहिलो पटक आधारभुत तह कक्षा आठको परिक्षा संचालन गरेको घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाले सोमवार नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । (more…)...
रीता लामा दाङमा ३१ वटा पुल बन्दै छन् । सडक डिभिजन कार्यालय दाङले २३, पुर्वाधार विकास कार्यालयले आठ तथा पुल महाशाखा नेपालगञ्जले दुइ वटा पुल निर्माण गरिरहेका छन् । (more…)...
गुपचुपमा सबैलाई चकित पारिन् अभिनेत्री श्वेता खड्काले
काठमाडौं, २५ चैत । विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिले सामाजिक कार्य गर्नेभन्दै मिडियाबाजी गरिरहेका बेला अभिनेत्री श्वेता खड्काले सुटुक्क थुप्रै घरहरू बनाएर गरिव जनताको मन जितेकी छिन् । (more…)...